Umkhuba wemvelo. Ukupakisha kuyenziwa kabusha, kuguqulwe kube usoso, noma kumane kuncibilike
Ososayensi e-Astrakhan State Technical University bakhiqize isisongelo sokudla esingakwazi ukushintshanisa ngezinto ezingancintisana nezinto zepulasitiki zepulasitiki. Izinto eziyinhloko zokwenziwa ...
NgoJuni 16, kwakhishwa umbiko ngeqembu lososayensi baseRussia nabaseYurophu (abamele iRussia, iGreat Britain, iFrance, iHolland, iJalimane neSwitzerland), abafunda ...
Umbono: akuyona yonke imikhiqizo "yemvelo" enempilo ngokufanayo
Ngabe ufuna igama "lemvelo" ekudleni okuthengayo? Namuhla, abaningi bayakwenza. Isidingo sabathengi siyacindezela ...
Imakethe ye-biopesticides izokhula
Imidondoshiya yase-Agrochemical idinga kakhulu ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwemikhiqizo yezinto eziphilayo ukuze kuvikeleke izitshalo ezibalulekile, kepha yisiphi isitshalo esizoba esokuqala ukunikela ngemikhiqizo eluhlaza yokuncintisana? ...
Abenzi bezokupakisha bafuna ukufaka u-100% wemikhiqizo yabo ukuthi icutshungulwe
UMnyango Wezemvelo Nezemvelo usungule iphrojekthi ngokuya ngokuthi umthwalo wokucubungula zonke izinhlobo zokupakisha, owoyela namabhethri kusuka ku-2021 uzonikezwa ngqo ...